Serenity (2005) | MM Movie Store
အနာဂတျကာလ ၂၆ ရာစုနှဈတမှာကမ်ဘာဂွိုလျဟာ ဂွိုလျပေါငျးမြားစှာရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ကွပွီးအဲဒီဂွိုလျတှမှော အခွခေနြထေိုငျဖို့ လူတှကေို လိုအပျတာ ထောကျပံွ့ပီး နစေပေါတယျ ……ယဉျကြေးမှုမွငျ့မားနတေဲ့ ဒီလူ့အဖှဲ့အစညျးကိုဂွိုလျမြားဆိုငျရာ လှတျတျောကနေ အုပျခြုပျပါတယျ…..
အဲဒီမှာ လှတျတျောဟာ သိပ်ပံစမျးသပျမှုတှေ မြားစှာလုပျနပွေီးစမျးသပျခံထဲတှထေဲမှာ ရဈဗားတနျဆိုတဲ့ ၁၇ နှဈအရှယျ ကောငျမလေးလညျး တယောကျအပါအဝငျပေါ့….ဒီကောငျမလေးမှာ ထူးခွားတဲ့စှမျးအငျတှရှေိလတေော့ သိပ်ပံပညာရှငျအဖှဲ့က အဆုံးမဲ့စှမျးအငျရရှိအောငျကွိုးစားပွီးလကျနကျသဖှယျအသုံးခဖြို့ကွိုးစားလာကွတယျ….
အဲဒီထဲကနေ သူမရဲ့အကိုဆိုငျမှနျ တနျ ဟာသူမကို ရအောငျ ကယျထုတျသှားခဲ့ပွီးSerenity ဆိုတဲ့ ယာဉျနဲ့ ထှကျပွေးကွတယျ…အဲဒီလို သူတို့ ထှကျပွေးသှားတဲ့နောကျ လှတျတျောအဖှဲ့ကနေ လူသတျရာမှာတျောလှနျးတဲ့ ရှငျးလေးရေးသမားတှကေိုလှတျလိုကျကွတယျ….သူတို့တှလှေတျမွောကျပါ့မလား…..
ရှုတျထှေးပှလေီလှတဲ့ ၂၆ရာစုရဲ့ အဖှဲ့အစညျးပေါငျးမြားစှာရဲ့ရနျကရော လှတျမွောကျအောငျဘယျလိုရုနျးကနျကွမလဲ….ရုပျရှငျအထူးပွုလုပျခကျြကောငျးကောငျးနဲ့ ကွညျ့လို့ကောငျးတဲ့
သိပ်ပံရုပျရှငျကားကိုမှ သဘောကတြယျ…အကျရှငျခနျးတှလေညျးပါမှဖွဈမယျ…Rating တှလေညျး လနျးရမယျ…
ဇာတျလမျးလညျးမိုကျမှ အဆငျပွမေယျဆိုတဲ့သူတှအေတှကျ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး….နငျးကနျကောငျးကွောငျးညှနျးဆိုပါရစေ….
အနာဂတ်ကာလ ၂၆ ရာစုနှစ်တမှာကမ္ဘာဂြိုလ်ဟာ ဂြိုလ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးအဲဒီဂြိုလ်တွေမှာ အခြေချနေထိုင်ဖို့ လူတွေကို လိုအပ်တာ ထောက်ပံ့ပြီး နေစေပါတယ် ……ယဉ်ကျေးမှုမြင့်မားနေတဲ့ ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုဂြိုလ်များဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကနေ အုပ်ချုပ်ပါတယ်…..
အဲဒီမှာ လွှတ်တော်ဟာ သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုတွေ များစွာလုပ်နေပြီးစမ်းသပ်ခံထဲတွေထဲမှာ ရစ်ဗားတန်ဆိုတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးလည်း တယောက်အပါအဝင်ပေါ့….ဒီကောင်မလေးမှာ ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်တွေရှိလေတော့ သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့က အဆုံးမဲ့စွမ်းအင်ရရှိအောင်ကြိုးစားပြီးလက်နက်သဖွယ်အသုံးချဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်….
အဲဒီထဲကနေ သူမရဲ့အကိုဆိုင်မွန် တန် ဟာသူမကို ရအောင် ကယ်ထုတ်သွားခဲ့ပြီးSerenity ဆိုတဲ့ ယာဉ်နဲ့ ထွက်ပြေးကြတယ်…အဲဒီလို သူတို့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့နောက် လွှတ်တော်အဖွဲ့ကနေ လူသတ်ရာမှာတော်လွန်းတဲ့ ရှင်းလေးရေးသမားတွေကိုလွှတ်လိုက်ကြတယ်….သူတို့တွေလွတ်မြောက်ပါ့မလား…..
ရှုတ်ထွေးပွေလီလှတဲ့ ၂၆ရာစုရဲ့ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာရဲ့ရန်ကရော လွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုရုန်းကန်ကြမလဲ….ရုပ်ရှင်အထူးပြုလုပ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့
သိပ္ပံရုပ်ရှင်ကားကိုမှ သဘောကျတယ်…အက်ရှင်ခန်းတွေလည်းပါမှဖြစ်မယ်…Rating တွေလည်း လန်းရမယ်…
ဇာတ်လမ်းလည်းမိုက်မှ အဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး….နင်းကန်ကောင်းကြောင်းညွှန်းဆိုပါရစေ….
Wall Lover – Link 1